Ogaden News Agency (ONA) – Wariye Jeffrey Gettleman oo Canbaareeyay Taliska Wayaanaha.
Wariye Jeffrey Gettleman oo Canbaareeyay Taliska Wayaanaha.
Mid kamid ah wariye yaasha ugu caansan dunida oo warfidiyeenka lahadlay ayaa sheegay in uu aad uga walaacsan yahay xaaladaha qalafsan ee ay kusugan yihiin dadka shacabka ah ee kusoo nool maamulka kali taliska ah ee wayaanaha.
Jeffrey Gettleman oo ah wariye katirsan wargayska caalamiga ah ee New York Times ayaa sheegay in uu ogyahay isla markaana ka walaacsan yahay dhibaatada haysata shacabka Itoobiya gaar ahaa Oromada iyo Axmaarada kuwaas oo uu kusheegay in ay daris lanoqdeen dhibaatooyin ay ugaysanayaan ciidamada wayaanuhu.
Sidoo kale wariye Jeffrey Gettleman oo mudo kuxidhnaa wadanka Itoobiya ayaa sheegay in meesha ugu daran ee dadka shacabka ah lagu dhibaatayn jiray hadana lagu dhibaateeyo uu yahay dhulka Ogadenia, wuxuuna wariyuhu xusay in dowladaha aduunku ay indhaha kalaabteen dhibka kajira Ogadenia.
Wariye Jetffey Gettleman ayaa sheegay in isaga laftiisa lagu xidhay wadanka Itoobiya kadib markuu soo gudbiyay dhibaatada joogtada ah ee lagu hayo shacabka ree Ogadenia, wuxuuna wariyuhu sheegay in ay Ogadenia kajirto iqaab culus oo loogaysto shacabka aan isdifaaci karin ee Soomaalida Ogadenia.
Sidoo kale wariyaha ayaa xusay in dadka Oromada iyo Axmaarada ee kacdoonada wada ay caawisay tignoolajiyada waxayna nasiib u heleen ayuu yidhi in ay dunidu ogaato dhibka kajira Goboladaas, hase yeeshee wariyaha ayaa carab baabay in wadanka Ogadenia aysan kajirin isgaadhsiinta la adeegsado xiligii uu isagu tagay.
Sidoo kale wariye Jeffrey Gettleman ayaa sheegay in uu isagu shakhsiyan kahadlay cadaalad darada ay dowlada maraykanku kuhayso shucuubta lagumaysto, wuxuuna wariyuhu xusay in dhaqaalaha maraykanku uu bixiyo lagu iqaabo shacabka caawimaada ubaahan. Wariyaha ayaa ah nin haysta bilad sharaf taas oo lasiiyay kadib markuu tagay wadanka Ogadenia iyo guud ahaan Itoobiya halkaas oo uu wixii dadnaa dibada soodhigay.
Gabagabadii wariyaha ayaa siwayn udhaliilay taliska wayaanaha wuxuuna dunida kacodsaday in wax laga qabto dhibaatada lagu hayo shacabka Itoobiya, wuxuuna wariyuhu xusay in cadaalad daradii isaga kudhacday ay wali kajirto wadanka Itoobiya.